China Groundnut Sesame Sunflower Rapeseeds voanjo voatavo voa voatavo menaka mpanamboatra sy mpamatsy | Huipin
Voasarimakirana Sesame Sunflower Rapeseeds voanjo voatavo voa voanio Press
Re rehetra, Oilseed
Voanjo, katsaka, tanamasoandro, sns.
35-50 Ton isan'andro
Haben'ny fonosana isaky ny vokatra iray
Lanja mavesatra isaky ny vokatra iray
Tsindry solika karazana HP260 diaSpiral mitohy Masinina fanaovan-gazety solika.Ny press menaka no tena vokatra eto amintsika, afaka miasa mandritra ny volana maromaro izy io. Izy io dia mety amin'ny zavamaniry menaka lehibe indray mandeha tecnology press na pre Press - leaching tecnology na tecnology dingana doublepressing. Ity milina fanaovana menaka sakafo ity dia mety amin'ny voanjo press, cottonseed, rapeseed, voa sunflower, germ germ, voa mainty, voaniho ary avo hafa masomboly menaka atiny misy menaka. Misy menaka ambany sisa ao amin'ireo mofomamy misy menaka.
YZY260 milina fanindriana mialoha dia mety amin'ny toetra mampiavaka ny fizotran'ny fanindriana mialoha.Raha ny fepetra fitsaboana alohan'ny fitsaboana mahazatra dia manana tombony manaraka ity. (1) Teknolojia alemanina, fiantohana hery 3.5, maharitra.
(2) Tsotra sy mitombina ny endriny, ary ny tahan'ny tsy fahombiazana no ambany indrindra amin'ny fanontana menaka anatiny.
(3) Avo ny anjaran'ny tsena, mahatratra 350 set mahery, manana laza tsara.
(4) Ny famolavolana paosin-tsolika "tsindry tsikelikely" dia afaka mamonjy mihoatra ny 20% ny fanjifana herinaratra raha ampitahaina amin'ny paompy menaka lehibe hafa.
(5) Ny boaty ho an'ny kitapo dia nohosorana savony, ary ny maripanan'ny solika ao anaty boaty dia mety haharitra 50 - 60 C.
(6) Ny fanontana menaka YZY260 dia an'ny paompy menaka salantsalany, izay tena mety amin'ny fandidiana sy ny fikojakojana.
(7) AdjustCake Institution misy patanty, AdjustCake mora sy haingana. (8) Ny tranom-borona manintona dia manana ny mampiavaka ny lozisialy fanokafana sy ny famaranana ny takelaka, ny fivoriambe mora, ny fikojakojana ary ny fihenan'ny asa.
Fifandraisan-kery 75 KW
Fahaiza-manao pressinng 35-45ton isan'andro,
prepress 100-150ton isan'andro
Lanja (gW / NW) 8000kg
Refy 3800 × 2320 × 3800mm
Fitaovana firaka vy / vy manipy
Ny hafanana mangotraka sy endasina 60-110ºC
Fonosana amin'ny sarimihetsika plastika
Tahan'ny solika sisa tavela amin'ny mofomamy 6% -8%
Hebei Huipin Machinery Co., LTDis dia nirotsaka tamin'ny famolavolana lasantsy sakafo sy injeniera momba ny solika, fampandrosoana teknolojia vaovao, famokarana milina sy fitaovana, injeniera, fametrahana ary fanirahana ireo serivisy fanofanana iray ao amin'ny iray amin'ireo orinasam-pampianarana matihanina.
Teo aloha: Mpanala menaka soja mangatsiaka mahomby
Manaraka: Sivana ravina marindrano ho an'ny solika
Masinina vita amin'ny menaka mangatsiaka
Masinina fanaovan-gazety solika
Gazety Oliva Oliva
Masinina fanaovan-gazety menaka kely
Milina fanosotra menaka varotra malaza ...
Mpanala menaka soja mangatsiaka mahomby
Vokatra asongadina, Sitemap, Vokatra rehetra Masinina vita amin'ny menaka mangatsiaka, Mpanondraka solika voa, Gazety Oliva Oliva, Mpanondraka solika, Masinina fanaovan-gazety menaka kely, Masinina fanaovan-gazety solika,